Bowling in Yangon - Yangon Thu Michelle Video
Activities, Video Jul 27, 2018
Honor7A ကဘယ်လိုုအမျိုးအစားလဲ သိချင်ရင် … https://www.facebook.com/commerce/products/1552820824827942/ မှာ ဝင်ကြည့်လိုု့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဘိုးလင်းပစ်လို့ရတာ နှစ်နေရာပဲရှိတယ်။ တစ်ခုက Asiapoint Bowling Center in Tharkayta နဲ့ နောက်တစ်ခုက Right Track Bowling ပဲရှိတယ်။ Asiapoint Bowling Center က စားသောက်ဆိုင်နဲ့တွဲဖွင့်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘိုးလင်းသီးသန့်ဆော့ချင်လို့ Right Truck Bowling ကိုပဲသွားဆော့ဖြစ်တယ်။ နေရာက သုဝဏ္ဏလမ်းဆုံနား၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်၊ ဦးဘကျော်လမ်းထဲကနေ တည့်တည့်ဝင်သွားရုံပဲ။ လမ်းအဆုံးနား ဘိုးလင်းတိုင်အကြီးကြီးထောင်ထားတဲ့ခြံပဲ။ လူများလို့ ပစ်လမ်းနေရာရဖို့သေချာချင်ရင် 571705, 09250657657, 09965543907 ကို တစ်လုံးမရ တစ်လုံးဆက်ကြည့်ပြီး ဘိုကင်တင်ထားလို့ရပါတယ်။
ဘိုးလင်းက ကစားပွဲတစ်ပွဲကို တစ်ယောက်ထဲပစ်မယ်ဆိုရင် နှစ်ထောင်။ ဘိုးတိုင်ဆယ်တိုင်ကို အကုန်လဲအောင် နှစ်ကြိမ်ပစ်ခွင့်ရှိတယ်။ အဲ့ဒါလို ဘိုးတိုင်ဆယ်ခါထောင်ပေးတယ်၊ အကြိမ်နှစ်ဆယ်+ဘောနက်စ်တစ်ကြိမ်ဆိုတော့ ၂၁ခါပစ်မှ တစ်ပွဲ၊ တစ်ပွဲကိုနှစ်ထောင်။ လူများရင် အလှည့်စောင့်ရတော့ ပိုကြာတယ်။ များများပစ် များများပေးရတဲ့သဘောပဲ။ လူစုသွားရင် ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဘိုးလင်းပစ်ရင် လမ်းလျှောက် လက်လွှဲ ခါးလှည့်ပစ်ရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်ပစ်ရင်လည်း ဘိုးတိုင် ထိ မထိ ရင်ခုန်နေရတယ်။ အပေါင်းအသင်းနဲ့ဆိုလည်း ငြင်းကြ ခုန်ကြနဲ့ မပျင်းရဘူး။ သိပ်လဲမခက်တော့ သွားကစားကြည့်ကြည့်ပါလို့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိုးလင်းကစားနည်းရှိခဲ့တာ ကြာပြီ။ အဲ့ဒီတော့ မေးခွန်းသုံးခုမေးမယ်
၂) မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဘိုးလင်းကစားရုံက ဘယ်မှာလဲ။
၃) ဘိုးလင်းကို ဘယ်နိုင်ငံက စတင်ကစားခဲ့တာလဲ။
ဖြေမယ်ဆိုရင် အဖြေကို #yangonthumichelle_bowling #honor7Agiveaway hashtag နှစ်ခုနဲ့ အတူ ဒီပို့စ်ကိုရှယ်ပေးပါ။ public နဲ့ရှယ်မှမြင်ရမှာနော်။ Honor Myanmar ပေ့ချ် နဲ့ ဒီရန်ကုန်သူမီရှဲ ပေ့ချ်ကို Like and see first လုပ်ထားပေးရမယ်။ အဖြေတွေကို အင်္ဂါနေ့၃၁ဇူလိုင် ညနေခြောက်နာရီထိပဲလက်ခံမယ်။ ၃၁ရက်နေ့ညကျမှ Birthday Giveaway နဲ့အတူ အဖြေမှန်တဲ့လူတွေကိုမဲနှိုက်ပေးမယ်။ ဒီပို့စ်အတွက် လက်ဆောင်ကတော့ Honor7A ဖုန်းတစ်လုံးပါ။
Gift sponspor by Honor Myanmar
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့သင်ပေးတဲ့အပြင် ရိုက်ကူးခွင့်ပေးတဲ့ ဦးမျိုးအောင်(ဘိုးလင်းအသင်းဥက္ကဌ) နဲ့ မမျိုးမျိုး ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
This week, I will share about bowling in Yangon. There are only two bowling center in Yangon till 2018 but another place added in 2019. So three bowling center in Yangon, Right Track Bowling, Asia Point Bowling and Royal Sportainment Complex.
Among them, I visited the oldest place, Right Track Bowling Center. They train national representative bowlers. I felt authentic aroma when i got in and found some group of youth playing bowling.
The address is near Thuwanna junction point, on Lay Daung Kan Road, U Ba Kyaw St, Yangon. The place located at the end of the street. You can book by phone +951571705, +959250657657, +959965543907.
Bowling center in Yangon